Ukuphupha iBullfrog ▷ ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
IiBullfrogs zizalelwa eAfrika nakuMntla Melika. Kumashumi eminyaka akutshanje, nangona kunjalo, ii-amphibians nazo zisasazekile kweli lizwe: ekuqaleni, zazenzelwe ukuzala ukubonelela ngemilenze yamasele kwezorhwebo lokutya, kodwa iisampulu ezingakumbi nangakumbi zikhutshiwe kumachibi nakumachibi okudada, apho zande ngokukhawuleza.
Njengoko zikhulu kakhulu kwaye zinoburharha ngakumbi kuneentlobo zemveli, ziye zaba sisisongelo kwizilwanyana zasendle njengezilwanyana ezihlasela izilwanyana kunye nabakhuphisana nabo ekutyeni. Inkunzi yenkomo, efikelela kumasentimitha angama-25 ubude, inegama layo kwilizwi layo elinamandla elikhumbuza ukuthotywa kweenkomo. Izilwanyana ezinzima zingatsiba ngokumangalisayo kude kwaye zibe ndlongondlongo kakhulu.
Ukuba uphupha inkunzi yenkomo, uya kuchukunyiswa bubungakanani beli silwanyana. Mhlawumbi wenza ngobundlongondlongo kwaye iphupha elo lihambelana noloyiko. Ingxolo enkulu inokuvakala nasephupheni. Ukutolikwa kwamaphupha, ukuphupha kufuneka kuthathele ingqalelo ukuba ama-amphibian avusa umdla okanye andonyanyisile.
1 Uphawu lwephupha «inkuku yesele» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «inkuku yesele» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «inkuku yenkomo» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «inkuku yesele» - ukutolikwa ngokubanzi
Ekuchazeni iphupha, uphawu lwephupha "i-bullfrog" luphawu lokuguquguquka nokulungelelanisa. Kwelinye icala, njengendidi engaqhelekanga, ihleli ngokusisigxina kwilizwe langaphandle kwaye yoyisa ezinye izilwanyana. Kwelinye icala, ihamba ngamanqanaba aliqela ophuhliso ngaphambi kokuba ibe lixoxo elipheleleyo elipheleleyo.
I-bullfrog incarnated njengophawu lokulala Ukuhluka kwezinto. Ukuphupha, iphupha elo lithetha ukuba kuya kufuneka uvuleleke ngakumbi kubuchule bakho obufihliweyo kunye neempawu ezintle.
Kwakhona i-amphibian in imihlaba emibini ekhaya, emanzini nasemhlabeni. Ukutolikwa kwamaphupha, i-bullfrog ikhuthaza ukuphupha ukuzisa umhlaba wayo weemvakalelo ngokuvisisana nengqondo. Ke unokuxhamla kwezi ndawo zombini.
Ukongeza, eli sele likhulu lingangumqondiso wephupha lokungazinzi kwaye Ukungaqondi ukuba. Ukutolikwa kwamaphupha, oku kunokuba luphawu lwesilumkiso lokuba ungabeki emngciphekweni kakhulu. Nangona kunjalo, iphupha linokukwazisa impumelelo yenkampani eyenza intliziyo yephupha ixhume ngovuyo.
Abantu abaninzi bayacaphuka xa bebona i-amphibian. Kwitoliki yamaphupha, uphawu lwephupha "i-bullfrog" ifuna oku. Asco zigqitywe, njengoko iimpawu ezingacingekiyo zinokufihlwa ngasemva kwangaphandle okungathandekiyo. Mhlawumbi ukuphupha kufuneka uzame into entsha.
Uphawu lwephupha «inkuku yesele» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, uphawu lwephupha «i-bullfrog» idlala njengophawu lokuzala kunye Inkanuko indima ephambili. Rhoqo iphupha malunga ne-amphibian luphawu lokuba iphupha alonelisekanga ngumzimba wakho kunye nobuni bakho. Ekuchazeni amaphupha, i-subconscious iyalumkisa ukuba yamkele njengoko injalo, ukuze umzimba nomphefumlo zihambelane.
Ngokukodwa kumaphupha amantombazana nabasetyhini, i-bullfrog njengophawu lwephupha inentsingiselo efanayo nakwinkosana yesele evela kwiintsomi. Isilwanyana sibizwa ubuntu uphathwe kwaye ke ufikelela kwinqanaba eliphezulu.
Ngokufuziselayo, oku kuthetha ekutolikeni ephupheni: ubudlelwane bezesondo kuphela kufuneka buqale ukuphefumla ngemfudumalo yokomoya ukuze yanelise. Enye into ibonakala kumanqanaba ahlukeneyo ophuhliso lwe-amphibian. Bamele kweliphi inqanaba lokukhula komntu ukuphupha kuyabonakala ngoku.
Uphawu lwephupha «inkuku yenkomo» - ukutolika kokomoya
I-bullfrog ekuchazeni amaphupha aloo nto. Ukukhula y Ulwaphulo. Njengophawu lokuphupha lotshintsho, luyanceda umphuphi ukuba azitshintshe kaninzi-ninzi ukuze akhule ngokomoya.
Ukuhamba ngokutsiba kwesilwanyana ephupheni kubonisa ukuba kunokwenzeka ukuba wenze "ukutsiba" okukhulu ngokwengqondo. Oku kuthetha inkqubela phambili ekukhuleni kwengqondo kunye nokomoya.